Kutheni kufuneka uphucule kwiGoogle Universal Analytics | Martech Zone
Kutheni le nto kufuneka uphuculwe kwiGoogle Universal Analytics
NgoLwesithathu, Oktobha 15, 2014 NgeCawa, Oktobha 19, 2014 UTim Flint
Masikhuphe lo mbuzo endleleni ngoku. Ukuba ufuna ukuphucula ukuya Uhlaziyo olutsha lukaGoogle oluHlaziyiweyo? Ewe. Ngapha koko, kunokwenzeka ukuba sele uhlaziyiwe kwi-Universal Analytics. Kodwa, ngenxa yokuba uGoogle ekuhlaziyilele iakhawunti yakho, oko akuthethi ukuba akukho mfuneko yakwenza enye into okanye ufumana uninzi lweakhawunti yakho ye-Universal Analytics.
Ngoku, Uhlalutyo lukaGoogle oluBanzi iku- isigaba sesithathu yokukhutshwa kwayo. Iphumile kwi-beta kwaye uninzi lweeakhawunti zihlaziywa ngokuzenzekelayo. Ngapha koko, awunakho ukukhetha uhlobo lwakudala lwefayile ye kubahlalutyi xa useta iakhawunti entsha kwakhona. Xa i-Universal Analytics yaqala ukuphuma kwi-beta, yayisalahlekile into ebalulekileyo kwiinkampani ezininzi. Oko kukubonisa iimpawu zentengiso ezikuvumela ukuba wenze Uluhlu lokujonga kwakhona. Ngoku, iimpawu zokubonisa zidityaniswe ngokupheleleyo kwi-Universal Analytics (UA), oko kuthetha ukuba akukho nto ibambe iakhawunti entsha ekuhambeni ne-UA. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba ngenxa yokuba iakhawunti yakho iphuculwe ukuba azisekho izinto ekufuneka uzijongile xa uhlaziya.
Izinto omele uzilumkele
Okwangoku, ukuba ikhowudi kwindawo yakho isebenzisa i-ga.js, urchin.js, okanye iinguqulelo ze-WAP zekhowudi, kuyakufuneka uhlaziye ikhowudi xa iGoogle ifikelela Isigaba sesine sohlaziyo lwe-Universal Analytics. Kwiminyaka emibini yokwazisa isigaba sesine, ezo nguqulelo zekhowudi ziya kuncitshiswa. Kwaye ayisiyombhalo nje kuphela oya kuncitshiswa. Ukuba okwangoku unokuguquguquka ngokwesiko okanye izinto ezichaziweyo zomsebenzisi ozisebenzisayo ukulandelela idatha, kuya kufuneka uyiguqule ibe yimilinganiselo yesiko ukuze ukwazi ukuzisebenzisa, njengoko ziya kuhluthwa nazo.
Oku kuyakuthetha ukuba kwixa elizayo, ukuba usebenzisa indlela yakudala yokwenza umkhondo wokulandela umcimbi, kuya kufuneka uhlaziye kwinguqulelo entsha yekhowudi yokulandela umsitho. Ke, ukuba ikhowudi yakho ayikahlaziywa okwangoku, kutheni ugqitha kuyo yonke le ngxaki ngoku endaweni yokulinda iminyaka emibini?
Kutheni ugqibezela ukuphucula?
Isizathu sikaGoogle sokuphucula yayingekokuphela kwabo ukuchitha ixesha lakho. Bakhuphe ezinye izinto eziza kuthi, ukuba uthatha ixesha ukuzisebenzisa, ziya kukunceda ukuba ulinganise izinto ongazange wazi ngaphambili. Iqonga elitsha liya kukuvumela ukuba:
Qokelela idatha kuyo nayiphi na into
Yenza ubungakanani beSiko kunye neMetriki yesiqhelo
Misela ii-ID zomsebenzisi
Sebenzisa i-Ecommerce eyandisiweyo
UGoogle ngoku uneendlela ezintathu zokuqokelela idatha: i-analytics.js yewebhusayithi, ii-SDK zeselfowuni ze-iOS kunye ne-Android, kwaye- kum yeyona nto imnandi- umlinganiso womgaqo-nkqubo wezixhobo zedijithali. Ke ngoku unokukhangela iiwebhusayithi zakho, iiapps zakho, kunye nomatshini wakho wekofu ukuba uyafuna, ngaphakathi kuGoogle Analytics. Abantu sele bebeka umgaqo olandelwayo ukuze bakwazi ukubala kugcino lwetrafikhi yeenyawo, ukubeka esweni amaqondo obushushu, nokunye okuninzi. Amathuba awapheli, ngakumbi ngenxa yenqaku elitsha elilandelayo.
Imilinganiselo yesiqhelo kunye neMetric yesiqhelo
Ubungakanani ngokwesiko kunye neemetriki zesiko ngokwenyani luguqulelo lwesuphu yeenguqulelo zesiko lakudala. Ukukunika umbono wokuba inokuba namandla kangakanani le milinganiselo mitsha, masithi xa umntu ebhalisela inkonzo yakho eyenzeka njengenkonzo efana neYelp, ubabuza uthotho lwemibuzo. Ungababuza umbuzo onobungakanani besiko obubizayo Uhlobo lokutyela oluthandayo. Iimpendulo zale mibuzo inokuba kukutya kwaseMexico, iivenkile zesandwich, njlnjl. Emva koko ungabuza umbuzo olandelayo ukuba batya kangaphi ngenyanga. Oku kukunika i-metric entsha yesiko Isixa esidla ngaphandle ngenyanga okanye i-AEOM. Ke, ngoku unokujonga idatha yakho ukwahlulahlula abasebenzisi abohlukeneyo ukuze babone ukuba bayisebenzisa njani indawo yakho. Umzekelo, unokwahlulahlula abantu abathanda iivenkile zesandwich ezitya ngaphandle amaxesha ama-5 ngeveki. Oku kunokukunceda ukuba ukwazi ukujonga ngcono umxholo kwindawo yakho. Amathuba awapheli, ngakumbi xa usongeza oku kwiiapps zakho zeselfowuni. Ukuba ukongeze oku kulandelwa kumdlalo wakho weselfowuni, unokufumana zonke iindlela abathengi abadlala ngazo umdlalo.
Kuba abathengi abaninzi basebenzisa ii -apps zeselfowuni kunye nabathengi bayatshintsha phakathi kweefowuni, iipilisi, kunye nezinye izixhobo, ngekhe wazi ukuba bangaphi abasebenzisi ababodwa kunye nabasebenzayo onabo ngenyanga ngendabuko kubahlalutyi. Ngoku ngokwenza i-ID yesiko olinike abasebenzisi bakho, unokulandela umkhondo womsebenzisi osebenzisa ifowuni yakhe, ithebhulethi kunye nelaptop ukufikelela kwindawo yakho njengomsebenzisi omnye. Oku kukunika ukuqonda ngakumbi kunangaphambili ngendlela abathengi abayisebenzisa ngayo inkonzo yakho. Kuthetha ukuba akusayi kuphinda kubalwe abasebenzisi abathathu okanye abathathu. Idatha yakho icoca indlela.
Ngeengxelo ze-ecommerce eziphuculweyo, sukufumana nje ukuba zeziphi izinto ezithengiweyo kwindawo yakho kunye nokuba kungenise malini. Fumanisa ukuba baphelele njani ukuthenga. Uya kufumana iingxelo ezinje ngento eyongezwa ngabathengi kwiinqwelo zabo nezinto abazisusayo kwiinqwelo zabo. Uya kwazi nokuba baqala nini ukuphuma kwaye bafumana nini ukubuyiselwa imali. Ukuba i-ecommerce ibalulekile kwindawo yakho, jonga nzulu koku Apha njengoko kuninzi kakhulu ukujonga.
Nantsi ividiyo yokuba IxabisoGrabber usebenzisa iGoogle Universal Analytics:
Ingaba ulunde ntoni? Thatha ithuba ledatha entsha onokufikelela kuyo ukuze unike abathengi bakho amava angcono nangakumbi kwizixhobo.
tags: i-google analyticsUhlalutyo jikelele kuGooglexabisoUhlalutyo jikelelehlaziya uhlalutyo kuGooglehlaziya uhlalutyo kuGooglenyusela uhlalutyo jikeleleyintoni uhlalutyo jikeleleKutheni uphucula uhlalutyo jikelele
UTim Flint nguMongameli we Uhlalutyo lweFlint, iarhente yedijithali egxile kwimithombo yeendaba ehlawulelweyo kwi-intanethi, uhlalutyo lwewebhu, kunye nokwenza ngcono inqanaba lokuguqula iinkampani ezinkulu nezincinci. Ukwangumsunguli we I-Smartups Indy, Iintlanganiso zokuhlangana qho ngenyanga ezifundisa abasunguli bokuqalisa kunye nabathengisi abasebenzela ukuqalisa indlela yokukhulisa ngcono amashishini abo.
Ukuqonda okumangalisayo kwindlela ubuNtloko obuSekwe ngayo kubuNcedisi beNtengiso yezeMoto
Ngaba kufanelekile ukuba wakhe okanye uthenge iqonga lakho elilandelayo lokuthengisa?